नेपाली फिल्ममा पनि ‘डर्टी’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← एकै सभासदका ३ राहदानी
कुवेतमाथि नेपालको १ रनको रोमान्चक जित →
नेपाली फिल्ममा पनि ‘डर्टी’
Posted on 06/12/2011 by जय आले | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं, मङ्सिर २० । मिलन लुथरियाद्वारा निर्देशित बलिउड फिल्म ‘डर्टी पिक्चर’ले भारत जस्तै नेपाली दर्शकबीच पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ । सधै शालिन र सामान्य पहिरनमा उत्रने हिरोइन विद्या वालनले फिल्ममा सन् ८० को दशककी दक्षिण भारतीय हिरोइन सिल्क स्मिताको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । सेक्सी लुक र संवादका कारण चर्चित रहेको फिल्म हेरेपछि पाँच नेपाली हिरोइनको टिप्पणीः
एउटा फिल्मको सम्पूर्ण प्याकेज छ । सुरूदेखि अन्तसम्म तानिएँ म । फिल्म बनाउन झन्डै १० वर्ष अध्ययन गरिएको रहेछ । विद्या बालानको इनोसेन्ट भूमिकाले फिल्मलाई भल्गर हुन दिएको छैन । सबैले गरेको मिहेनत फिल्ममा देखिएको छ । नेपालमा पनि यस्तो फिल्मको सम्भावना छ । तर यहाँ महिला सम्बन्धी फिल्म नै कम बनिरहेको छ । विद्याले पाएको जस्तो भूमिकाले कलाकारको क्षमता पनि उजागर हुन्छ ।
माल्भिका सुब्बा, अभिनेत्री
यो एउटा खतरानक फिल्म हो । ८० को दशकको घटनाक्रमले अहिलेका दर्शकको मन छुनु नै यसको प्रमाण हो । फिल्मलाई भल्गर भन्न मिल्दैन । भलै सेक्सको सहारामा सफलता हासिल गर्नेको अन्त्य पनि भयानक हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको छ । संवाद पनि सहयोगी छ । विद्यालाई भर्सटायल अभिनेत्री मान्न सकिन्छ । उनले सबै जोखिम मोलेर फिल्म खेलेकी छिन् । नेपालमा पनि प्रतिभाशाली अभिनेत्री छन् । तर यहाँ यतिको राम्रा फिल्म नै कति बनेको छ र ?
थोरैलाई मात्र मैले राम्रो फिल्मको सूचीमा राखेकी छु, त्यसमध्ये ‘डर्टी पिक्चर’ पनि एक हो । मान्छेको तुच्छ चरित्रको परिचय फिल्मले उजागर गरेको छ । सफलता पाउन मान्छे कतिसम्म गिर्नसक्छ र छोटो समयमा हासिल गरेको सफलता धेरै टिक्दैन भन्ने कुरा फिल्मले प्रस्तुत गरेको छ । फिल्म क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले यो फिल्म एकपटक हेर्नै पर्छ । नेपाली फिल्ममा सिल्कजस्ता पात्रको उपस्थिति हुनसक्छ । तर नेपालमा पनि यस्तो सफलता टिक्ने वातावरण छैन ।
ऋचा घिमिरे, अभिनेत्री
एकदमै राम्रो फिल्म बनेको छ । फिल्मको प्रोमो र थ्रिलरले मलाई हलसम्म जान प्रेरित गर्‍यो । हिन्दी फिल्म हेर्न पैसा खर्च नगर्ने म यो फिल्म हेर्न चाहिँ गइहालेँ । विद्याको अभिनय र उनले खेलेको भूमिकाको तारिफ गरिनै पर्छ । सिल्क स्मिताको बायोग्राफीभन्दा केही फरक प्रस्तुत गरिएको हुँदा पनि फिल्म राम्रो बनेको हो । कतैकतै भल्गर भएको हो कि जस्तो लागे पनि अर्को दृश्यले भल्ग्यारिटीलाई हटाइहाल्छ । संवादले पनि फिल्मलाई भल्गर हुनबाट बचाएको छ । वास्तविक नेपाली फिल्ममा पनि यस्ता चरित्रका अभिनेत्रीहरू मैले देखेकी छु । सेक्सलाई हतियार बनाएर सफल हुन खोज्ने मानिसको सफलताको आयु कम हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरू बुझ्न चाहन्नन् ।
विद्या बालानको फ्यान भएकोले हो या किन हो मलाई फिल्म उत्कृष्ट लाग्यो । उनी भर्सटायल अभिनेत्री हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। निर्देशकको मिहेेनत खेर गएको छैन । फिल्मको सुरूदेखि अन्तसम्म दर्शकलाई टक्क अड्याउन सक्नुनै सफल फिल्मको संद्या हो । जुन यसमा फिल्मको लागि सकारात्मक कुरा पनि हो । दिइएको कथावस्तु सेक्स सम्बन्धी भए पनि विद्याले न्याय र सन्तुलन गरेकी छिन् । फिल्म राम्रो हुन स्त्रि्कप्ट र क्यारेक्टर छनोटले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने यसबाट बुझिन्छ ।
This entry was posted in फोटो फिचर, मनोरन्जन. Bookmark the permalink.